Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ७ वर्षपछि फेरि ‘राउडी राठोर’ बन्दै अक्षय – Emountain TV
काठमाडौं, २५ जेठ । बलिउडमा केही वर्षयता सुपरहिट फिल्मको सिक्वेलको लहड चलेको छ । एकाधबाहेक भारतीय दर्शकले पनि ब्लकबस्टर फिल्मको सिक्वेल रुचाएका छन् । मेकर्स पनि नयाँ नाममा फिल्म बनाउनुभन्दा सुपरहिट फिल्मको सिक्वेल बनाउन कम जोखिमपूर्ण मान्दछन् । सिक्वेलको यस समयमा अभिनेता अक्षय कुमारको अर्को एक सुपरहिट फिल्मको पनि सिक्वेल बन्ने भएको छ ।
अक्षय कुमार र सोनाक्षी सिन्हाको जबरदस्त एक्सन-कमेडी-रोमान्टिक जनराको फिल्म ‘राउडी राठोर’ को दोस्रो पार्ट निर्माण गर्ने तयारीमा निर्माता जुटेका छन् । यस फिल्मको सिक्वेललाई लिएर अक्षयले पटक-पटक इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सन् २०१२ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्मको सिक्वेलका लागि केही समयदेखि निर्माण टिम स्क्रिप्टमा वर्कआउट गरिरहेको भारतीय मिडियाले बताएका छन् ।
प्रभुदेवाले यो फिल्मको निर्देशन गरेका थिए । सिक्वेल पनि उनले नै निर्देशन गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना छ । यद्यपि, यस विषयमा निर्माण टिमले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । फिल्ममा अक्षय कुमार नै लिड रोलमा हुनेछन् । सोनाक्षीको ठाउँ भने अरुले लिनसक्ने भारतीय मिडियाको अनुमान छ । अर्को वर्षबाट फिल्मको छायांकन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘राउडी राठोर’ मा अक्षयको दोहोरो भूमिका थियो । जसमा एक भूमिका पुलिस अफिसर र अर्को ठगको थियो । सिक्वेलमा पनि उनले दोहोरो भूमिका निभाउन सक्ने सम्भावना छ । अहिले उनी बलिउडका सफल निर्देशक रोहित शेट्टीको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । यसमा उनले एक पुलिस अफिसरको भूमिका निभाएका छन् । फिल्म २०२० को इदमा रिलिज हुँदैछ । फिल्मीखबरबाट
‘रातो टिका निधारमा’ भयो प्याकअप
प्रेमध्वज प्रधान : उमेरले ८० पार, संगीतमा सक्रियता अपार (भिडियोसहित)
विद्युतीय कारोबार ऐन : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि तरबार
विश्वका एक सय प्रभावशाली महिला : मिसेल ओबामादेखि नेपालकी भूमिका श्रेष्ठसम्म सूचीमा
मोदीको सपथग्रहणमा कंगना र शाहरुख पनि
‘प्रेमगीत ३’ : ‘गीत’ को अडिसनका लागि २५ युवती छनोट